I-TED Incoko ka-Adam Grant: I-3 Imikhwa Emangalisayo Yabacinga Ngokwantlandlolo - Umntu / Elon-Musk
Eyona Umntu / Elon-Musk Iindlela ezi-4 eziMangalisayo zokuCinga okuQala
Yintoni uninzi lweengcinga zethu ezintsha ezinje ngokufanayo ayisiyiyo le uyilindeleyo.(Ifoto: Ted)
Kwiminyaka esixhenxe eyadlulayo, isayikholojisti yombutho u-Adam Grant wadlulisa ithuba lokutyala imali kuqaliso lomfundi awayelusungula ngenxa yokuba yena nabaququzeleli bakhe babengalungelelaniswanga, bengaphantsi kokuzinikela. Le nkampani, ngoku eyaziwa ngokuba yiWarby Parker, kutshanje yathiywa igama njengeyona nkampani ibalaseleyo ngo Inkampani ekhawulezayo , kwaye ngoku uNks Grant ulawula utyalo-mali lwezi zibini. Indlela aba bafundi ababonakalise ngayo isithembiso esincinci ekwazile ukuyikhulisa inkampani ephazamisayo yabangela umdla kuMnumzana Grant kwaye kwamqhubela ekubeni aqalise ukufundisisa ii-original kunye nento ebangela ukuba baphawule.
Abokuqala bangabantu abangavumelaniyo-abantu abangenayo nje imibono emitsha kodwa bathathe inyathelo lokubalwela, utshilo uMnu. Grant Intetho yeTED irekhodwe ngoFebruwari kwiTED2016 kwaye ikhutshwe nje kwiTed.com. Bangabantu abemi ngaphandle kwaye bathethe. Abokuqala baqhuba ngobuchule kunye notshintsho kwihlabathi. Bangabantu ofuna ukubheja kubo, kwaye abajongi kwinto ebendiyilindele.
Kuyo yonke intetho yakhe, Mnu. Grant uxoxa ngokuhlekisayo ngemikhwa embalwa emangalisayo.
1. Basoloko befika emva kwexesha emthendelekweni
Yile nto yenzekayo xa usisi precrastinator.(Ifoto: Ted)
Kwikholeji, uMnu.Grant wagqiba iphepha lakhe lethsisi kwiinyanga ezine phambi komhla obekiweyo, kwaye xa wayese mntwana, wavuka ngo-5 ekuseni wayokuziqhelanisa nemidlalo yeNintendo de wayazi kakuhle, eyakhokelela kwiphephandaba lasekuhlaleni ukuba limenzele ibali elibizwa Icala elimnyama leNintendo. Ngokungafaniyo naye, nogqalwa njengomanduleli, uMnu. Grant wafumanisa ukuba oonozakuzaku abaphambili ngabona bakubekel 'amangomso oko. Ndandinomfundi ogama linguJihee, oweza kum wathi 'Ndinezona zimvo zam zokuyila xa ndilibazisa' kwaye bendifana nokuthi 'intle. Aphi la maphepha mane undityala wona? ' Wayengomnye wabafundi bakhe abanobuchule, ngenxa yoko wamcela umngeni wokuba afumane idatha. Uvavanye abantu ngemikhwa yabo yokuzibekel 'amangomso emva koko wacela abaphathi ukuba banike izimvo ngendlela abayile ngayo. I-precrastinators yavavanywa njengoyilo oluncinci kunolo lubambezela kancinci. Emva koko, uMnu.Grant uyile uvavanyo oluthile ukuze abone ukuba ubudlelwane phakathi kokulibaziseka kunye nobuchule yinto nje yokudibana okanye ukuba eyokuqala ibangela le yokugqibela. Ucele abantu ukuba bavelise imibono emitsha yeshishini, eyalela abanye ukuba bayenze kwangoko kwaye abanye bayenze emva kwemizuzu emihlanu okanye elishumi kamva. Xa abavavanyi abazimeleyo bebavavanya, abo babeka kade ukudlala i-Minesweeper imizuzu emihlanu (ngokuchaseneyo nokwenza kwangoko okanye ukudlala i-10) bakalwa njengepesenti ye-16 yokuyila ngakumbi. Kwaye kwakungekho ngenxa yeMineweeper uqobo; ukonyusa ubuchule kwenzeka kuphela xa ulibazisa emva kokufunda malunga nomsebenzi.
2. Bangabaphuculiyo, hayi abahambisi
Umbono wokuba owokuqala ukuzisa imveliso kwintengiso ngoyena uphumeleleyo yintsomi. Ngokophando olujonge ngaphezulu kweendidi zeemveliso ezingama-50, ezokuqala ukuthengisa-ezibizwa ngokuba ngabashenxisi-zisilele kwiipesenti ezingama-47 zexesha, ngelixa abaphuculi besilele kuphela iipesenti ezisi-8 zexesha. Umnumzana Grant khange acinge ukuba inkampani ye-e-commerce yomfundi wakhe iya kuphumelela kuba uthathe ixesha elide kwaye wabethwa waya kwintengiso, kodwa kungenxa yokuba wayezipha ixesha lokuyenza ngobuchule nangendlela eya kwenza ukuba abantu baneliseke kukuthenga iiglasi kwi-intanethi. Ukuze ube ngowokuqala, akufuneki ukuba ube ngowokuqala. Kufuneka uhluke kwaye ungcono, utshilo uMnu Grant kwintetho.
3. Banamathandabuzo amaninzi
UMartin Luther King Jr. ngoMatshi eWashington.(Ifoto: Wikimedia Commons)
Umnumzana Grant naye udlulile eWarby Parker kuba abasunguli bayoyika kakhulu. Endaweni yokuba basebenze kwinkampani, bonke bathathe i-internship ehlotyeni, ukuba ayisebenzi. Bonke baklelise kwizikhundla ezisisigxina emva kokuthweswa isidanga ngokunjalo-kwakhona, kwimeko nje. Phezulu, uninzi lwabantu basekuqaleni babonakala bezithembile, kodwa ngasemva kwemiboniso, baziva benoloyiko olufanayo kunye nokuthandabuza okwenziwa sithi sonke. Bayilawula ngokwahlukileyo, utshilo uMnu Grant, echaza ukuba oonobumba bokuqala bayanikezela ngakumbi ekuthandabuzeni kunokuba bazithandabuze, nto leyo ibakhokelela kuvavanyo, kuvavanyo nasekucokiseni. UMartin Luther King Jr.ngumzekelo ogqibeleleyo. Ngobusuku obandulela uMatshi eWashington, wayephezulu nge-3 AM ephinda ebhala intetho yakhe. Imizuzwana ngaphambi kokuba anyukele eqongeni, wayesabhala amanqaku kwaye ewela imigca. Imizuzu elishumi elinanye kwintetho yakhe, wemka kwisikripthi wathi ndinephupha, ebengekho kwisikripthi santlandlolo.
4. Eyona nto yoyikisayo kukusilela ukuzama
Abokuqala nabo baziva besoyika, utshilo uMnu Grant. Banoloyiko lokusilela, kodwa eyona nto ibabeka ecaleni thina kukuba boyika kakhulu ukusilela ukuzama. Bayazi ukuba ungasilela ngokuqala ishishini elonakeleyo okanye ngokusilela ukuqala ishishini kwaphela. Wongeze ukuba uElon Musk usandula ukumxelela ukuba uqinisekile ukuba iSpaceX siyasilela ukuyenza ukuba ijikeleze mayeke ukubuya, kodwa bekubaluleke kakhulu ukuba ungazami. Ukuba ujonga amasimi, ezona mvelaphi zinkulu zezona zisilelayo kakhulu, kuba zezona zizama kakhulu, utshilo uMnu Grant.
Umntu / Elon-Musk
Imifanekiso eqingqiweyo enkulu yelungu lobufazi elitsala umdla wamalungelo abantu basetyhini eBrazil
6 Oomatrasi abalaseleyo baBantu abaNzima [Hlaziya ngo-2021]
Imizobo efihliweyo kaVictor Hugo: Ngaba umbhali 'weLes Mis' wayekwangomnye waBona baGcisa babalaseleyo beXesha lakhe?
Ungayifumana ingwe yesilwanyana sasekhaya
uhlalutyo lweenkqubo zamanzi kakuhle